July | 2009 | အမှတ်တမဲ့.....နှင်း....
July 24, 2009 in အမှတ်တမဲ့ နှင်း နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး | Tags: အမှတ်တမဲ့...နှင်း | 1 comment
အမှတ်တမဲ့ နှင်းကို ဝင်ကြည့် ကြတဲ့ အားလုံးကို ကျေးဇူးပါ။ စာရိုက်တာ အောက်ကမြစ်တွေနေရာမှားနေတာကို ခွင့်လွှတ်ကြပါ။ အားလုံးကို လင့်ခ်တွေယူထားပါတယ်။
July 24, 2009 in ဘုန်းနေသွန်း | Tags: ဝဿန္တ | Leaveacomment
လမ်းကလေးက မျက်ရည်နဲ့ စွတ်စိုနေ။
ဖြတ်သွားဖြတ်လာ နှလုံးသားလေး နာဖျားခဲ့ပုံ။ ။
Faces Magazine; 2006
July 24, 2009 in ဘုန်းနေသွန်း | Tags: အေဒင် | Leaveacomment
ရှားရှားပါးပါးရေးဖြစ်တဲ့ အချစ်ကဗျာပါ။ ကဗျာထဲမှာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပေမယ့် ဒါဟာကဗျာထဲမှာပဲရှိမှာပါ။ တကယ့်လောကမှာရော….
ပျားရည် – ၂
July 24, 2009 in ဘုန်းနေသွန်း | Tags: ပျားရည် | Leaveacomment
ရင်ကို အသိမ်မွေ့ဆုံး ညှို့ယူလို့
သူ…. မသိတဲ့ ကဗျာ
ကိုယ့်အလွမ်းနဲ့သာ ကမ္ဘာတည်တော့။ ။
Fashion Image Magazine; 2007
July 24, 2009 in ဘုန်းနေသွန်း | Tags: မြစ်ဆိပ် | Leaveacomment
နှလုံးသားနဲ့ ဖြည့်မှပြည့်မယ့် ကွက်လပ်တွေအများကြီးနဲ့
July 24, 2009 in အောင်ပိုင်စိုး | Tags: သီချင်း | Leaveacomment
(သရဖူ မဂ္ဂဇင်း၊ ၂၀၀၅)
July 24, 2009 in ဖေဖော်ဝါရီ သံခိပ် ကဗျာစု | Tags: တမြေ့မြေ့ | Leaveacomment
နှလုံးသားများ အသေအပျောက်မရှိစေရ ။ ။
သြော်…. ကိုချက်ကြီးရယ် ချစ်ရေးကြိုက်ရေးဆိုတာ
July 24, 2009 in ဖေဖော်ဝါရီ သံခိပ် ကဗျာစု | Tags: မင်းစိုးရာ | Leaveacomment
အဝေးမှာ ဆတ်ဆတ်ခါအောင် ပြာနေတဲ့နှင်းတွေ
ဒီကဗျာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မင်းစိုးရာကို မေးကြည့်တော့ ခေါင်းစဉ်က ဟင်္သာတထွန်းရင်ရဲ့ သီချင်းတစ်ပိုင်းတစ်စလို့ သိရပါတယ်။
July 24, 2009 in ဖေဖော်ဝါရီ သံခိပ် ကဗျာစု | Tags: သူရနီ | Leaveacomment
အိပ်မက်တွေလိုရာမရောက်ခဲ့. . .
ပန်းကလည်းတစ်ကုံးစာမပြည့်နဲ့ . . .
လမ်းကြုံလို့လိုက်သွားတယ်မှတ်တယ် ။ ။